केपी ओलीले नेकपालाइ पतन गराएरै छोडने छन् ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
के पी ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको नजरबाट गिराएर पतन गराउन सक्लान त ?
उनि यो उदेश्यमा सफल हुने बाटोमा उन्मुख छन भन्न सजिलै सकिन्छ । किन भने उनले हौसियर जे बोलिराखेका छन् र सरकारले जे गरिराखेको छ त्यो बिलकुलै उल्टो छ । के पी ओली दुइ तिहाइको सरकार बनाएर ठुलो हाँक र सम्ब्रिध्दी र बिकाश र सुशासन को नारा दिएर अन्त्यांत पपुलर प्रधानमन्त्रि बनेका हुन् । अझ भने नाकाबन्दिको उग्र बिरोध गरेर महान राष्ट्रबादी बन्न पुगेगा के पी ओलीलाइ नेपालि जनताले एक राष्ट्रबादी अन्त्यन्त चलाक राज नेताको रुपमा हेरे । उनले गरेका कामलाई अन्ध भक्त भएर समर्थन गरे, पार्टीका कार्यकर्ता उनको बारेमा यत्ति केहि भन्यो कि अरिंगाल भएर खानिइहालने परिस्थिति बन्यो ।
धेरै कार्यकर्तालाई थाहा छ । उनि हावा कुरा गर्न र मजाक गर्न अन्त्यन्त कुशल छन, साच्चै भन्ने हो धुर्मुस सुन्तलीलाई पनि माथ गरिदिएका छन् हाल आएर । बिर्सेका मात्रै हो ! महाकाली सन्धिमा बिबाद हुदा देशले प्रत्येक बर्ष दुइ खरब भन्दा बढी पैसा आम्दानि गर्छ भनेर गर्न लगाए । त्यहि कुराले पार्टीलाई फुटाए पनि, त्यो कुरा फुस्सा भयो । उनको बोलीमा अन्त्यन्त आकर्षण छ / भाषण मिलाएर गर्न सक्छन सायद नेपालमा यत्तिको रोचक मिठो भाषण अरु कसैले गर्न सकुन ! छैन होला , बेला बेलामा अपत्यारिला काम गर्छन एक्लै पार्टीमा नकुनै मिटिंग बस्छ न त छलफल नै हुन्छ / ठुला निर्णय पनि गर्छन एक्लै तोडन पनि जानेका हुन्छन / पार्टीका अरु नेताले केहि नेपर्न सक्दैनन् / उनि व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्ने काम पटक्कै नगर्ने, काम नगरेर गरेका छौ भन्ने ! झुटलाइ कुरामा सहि साबित गर्न सिपालु छन् / मन्त्रिभएर नेपालि जनतालाइ दिएका आश्वासन केकति भयो, त्यता पट्टि नगएर, कहिले काठमाण्डौ धुलोमुक्त भयो भनेर घोषणा गर्छन अब मास्क लगाउन पर्दैन भन्छन तर आमकाठमांडू बासीले मास्क उतार्न सकेका छैनन / बाटोको खाल्डो पूर्न एकातर्फ सरकारले सकेको छैन / आम मान्छेले देखेकै छन् उता पानीजहाजको अफिस खोलेर टिकट किन्न जानुस भनेर केपीओलीले भाषण गर्छन । कार्यकर्ताले थपडी बजाउछन । कहा पानीजहाज छ ? कहाबाट कहा सम्म जान्छ ? काम नगर्ने र घुस खाने मन्त्रि गुठ र बिचौलिया साथमा राखेर बिकाशका गुड्डी हाक्ने ? वहा ! केपी ओलीजी !
पहिले शुशिल कोइराला पछि प्रधानमन्त्रि हुनकोलागि प्रचण्डसंगको आलोपालो प्रधानमन्त्रि हुनेगरि प्रधान पड कायौ । गद्दी छोडन कति गारो रहेछ । प्रचण्डलाइ नदिदा त खुस्कियो प्रधान मन्त्रि पद ! फेरी गल्ति गरिएछ अब बनाउने सरकार मा यस्तो हुने छैन भनि प्रचण्डलाइ मिसाएर दुइ तिहाइको सरकार बन्यो तर आलो पालो मिलोमतोको सरकार बनाउने हस्ताक्षर पनी गरे । अब प्रचण्डलाई गद्दी छोडने बेला आयो, अब उनले मध्यावधि चुनाबको तयारीमा लागेका छन् । हैन केपी ओली को रहेछन ? न पार्टीका नेताले ब्रेक लगाउन सक्छन न कार्यकर्ताले ! हैन बिधादेविलाई दुइ दुइ पटक सम्म राष्ट्रपति बनाउछन ? कसैले चुइक्क पनि गर्दैनन । कहिले होलि वाइन खुवाछन सबै पार्टीका मान्छेलाई, सपथ खादा इश्वर नामै लिन्नन । तर होलि वाइन खान पुग्छन । यिनी हिन्दु ब्राह्मण हुन कि ? पादरी हुन् ? भारतलाई सत्ते सराप गर्ने अनि अरुण नदीको ठेक्का भारतलाई दिन रिबन काटन मोदीलाई ल्याउने ?
भ्रष्टाचार गर्दिन सहन्न पनि भन्ने, भ्रष्टमान्छेलाई संरक्षण गर्ने । यिनले नेपालबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार न भूतो न भविष्यमा देख्न पाउने गराउने नै भए । यस्तै हो भने । प्रतिपक्षी कानमा तेल हालेर बसे पुग्ने भो ? यो सरकारलाई ढाल्न पर्दैन यो आफै ढल्छ । यस्ता बेतुकका कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिडे पछि ? अगर यो पार्टीका नेताहरु र कार्यकर्ताले बेलैमा नचेते अब धेरै कुर्नु पर्दैन होला । सम्बन्धित बिशेषज्ञहरुलाई पाखा लगाएर र देशका बलिया पाखुरिलाई बिदेशमा पठाएर न कुनै देश बन्न सक्छ न त त्यो देशको बिकाशको कल्पना नै गर्न सकिन्छ । लठैतले देशमा काँचुली फेरिन्छ भनेर बिश्वास गर्नु भनेको मनका लड्डु खानु जस्तै हो ।
नेपाल र नेपालीले राजनीतिको नाममा धेरै दुख पाइसके । कृपया कुरा नगरिकन काम गर्ने सरकार कार्यकर्ता र पार्टी चाहियो । ससाना झिना मसिना कामबाट जग बनाउदै अगाडी बढेर ठुला काममा पुग्न सकिन्छ । जग बिनाको घर सानो धक्काले ढल्छ । केपी ओलीलाई नेतृत्वमा राखिरहनु भनेको देशबाटै नेकपा बाहिरिनु साबित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
के पी ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको नजरबाट गिराएर पतन गराउन सक्लान त ? अहिलेको प्रश्न हो ।
यसरी बन्न पुगे रबि नेशनल हिरो !!!